इतिहासमै पहिलो पटक बेल्जियमको नगरपालिका सदस्यमा नेपाली मुलका क्षेत्री निर्वाचित! – NepalajaMedia
January 14, 2021 71
ब्रसेल्स, १ माघ । बेल्जियमको लुभेन नगरपालिकामा ईतिहासमै पहिलो पटक स्थानीय राजनीतिमा पहुँच राख्दै नगर सदस्य पदमा नेपाली मुलका कृष्ण सगुन क्षेत्री चुनिन सफल भएका छन् ।
गत निर्वाचनमा स्थानीय र प्रदेशसभातर्फ १२ जना नेपाली मूलका उम्मेदवारहरूले विभिन्न दलबाट उम्मेद्वारी दिएपनि एन्भिआबाट कृष्ण सगुन क्षत्री केवल १९ मतले पराजित थिए त्यस्तै, एस्पीआबाट सूर्य ढकाल र पिभिढीआबाट बिरमान मगर, डिल्ली राम भण्डारी, लोक राना मगर र सीदीएन्ड्भीबाट लिला शर्मा मानन्धर, रश्मी निरौला, हरियाली पार्टी ग्रुनबाट खड्ग बहादुर केसी, बालिराम झा, एन्भीआबाटै कुशल श्रेष्ठ लगायतले समेत सम्मानजनक मत हासिल गरेका थिए ।
Prevमदिराको तालमा छोराले गरे ६० वर्षीया आमाको हत्या!
Nextसंयुक्त आयोगको वैठकमा सीमा विवादबारे छलफल नगर्ने भारतको संकेत!
आमाले १२ वर्ष कान्छालाई प्रेमी बनाएपछि सुस्मिता सेनकी छोरी रिनाले दिइन् यस्तो प्रतिकृया